Firaisana ara-nofo : Manana ny tsirony koa ny fahazarana !
Rehefa miresaka firaisana ara-nofo, dia mazàna ny fitadiavana izay fomba hahatsara kokoa hatrany an’izany no tena omen-danja. Voateny foana, ao anatin’izany, fa ilaina ny manovaova ny fahazarana, mba tsy hankaleo. Adino, fa misy vokany tsara ihany koa ny fahazarana...
Tsy maintsy misy ny fahazarana
Tsy misy olona tsy mametraka fahazarana, amin’ny andavanandrom-piainany. Misy, ohatra, ireo izay tsy maintsy manasa tarehy, raha vao misokatra ny masony ; ny sasany, tsy maintsy misotro kafe mba hanombohana ny tontolo andro. Ao ireo tsy maintsy mivoaka kely ny trano rehefa faran’ny herinandro ; misy koa ireo tsy mahazo aina raha tsy mamaky boky kely mialohan’ny hatoriana… Ny mahagaga anefa dia tsy mametraka tahotra amintsika mihitsy ireny fahazarana ireny ary hahazoanntsika fy foana. Koa nahoana moa no voatery ho hafa ny eo amin’ny lafiny firaisana ara-nofo ?!
Atao fotoana ifanomezana
Tena azo raisina amin’ny lafy tsarany mihitsy ny fahazarana ao anatin’ny fiainam-pananahana. Mety hampirindra tsara ny fiarahana mihitsy aza ny fametrahana an’io fahazarana io, ohatra hoe : mifanome fotoana eo am-pandriana isaky ny sabotsy alina, ary atokana ho an’ny fifanakalozana fitiavana ara-batana mihitsy io fotoana io, fa adinoina ny asa, ny horonan-tsarimihetsika… amin’izay dia mahazo antoka, na ny an-daniny, na ny an-kilany, fa efa fotoana ifanaovana io, ka samy efa mivonona amin’izany. Ilaina mihitsy ny mametraka fahazarana toy izany, indrindra amin’izao fotoana mampirotoroto ny fiainana izao, ka indraindray samy reraka, hany ka tsy mahita fotoana hiarahana intsony, raha tsy terena.
Fa isan’ny tena mahatsara ny fahazarana ihany koa ny fahafantarana ny tena sy ny fahafantarana an’ilay olon-tiana. Efa “hay tsianjery” ny tokony atao, na ny hampientana ny tena, na ny hampiakarana ny fahafinaretan’ilay olon-tiana. Mety efa andrasana fotsiny aza hoe : eto izy ilay manoroka, eto izay misafosafo, eto izy ilay miato kely… Ary ny fiandrasana an’ireny fihetsika sy fanao efa mahazatra ireny aza indraindray no vao mainka mampiakatra ny hafanana. Vao tsinjon’ny saina fotsiny izay mety hitranga dia efa mientana sahady ny vatana. Ny tena tombony be ihany koa, araka izany, rehefa mipetraka ny fahazarana, dia tsy ahiana loatra ny fahadisoam-panantenana. Fa tsy manakana ny hanomezana tsiro hafa ny fiarahana izany rehetra izany, raha toa ka te hanisy sakay kely ny roa tonta.